Toerana - ITS Tech Tech
Momba an'i Delhi
New Delhi, faritanin'i Inde, dia tanàn-dehibe an-tanàn-dehibe ao avaratry ny firenena. Delhi dia ampifandraisina tanteraka amin'ny kolontsaina 1600 taona sy ny tanàn-dehibe an-tanandehibe teknolojia. Ny Delhi dia mampiseho ny tantaram-piainana ara-tantara avy ao amin'ny Mughal Era, ao anatin'izany ny Red Fort, ny fasan'i Humayun ary Qutub Minar. Delhi dia voarakitra ao amin'ny '50 Places of a Time' amin'ny National Geographic Traveler Magazine. Rehefa tonga any Delhi ianao dia azonao atao ihany koa ny mijery ny TAJ MAHAL (Fahagolosin'izao tontolo izao) satria akaiky an'i Delhi izy io ary nomena fitsidihana fanampiny nomen'ny ITS azy.
Innovative Technology Solutions dia manana birao foibeGurgaon. ITS dia voalohany amin'ny fampiofanana IT, fiofanana efitra ary orinasa mpanome tolotra.ITS Tech Schoolmanomefiofanana any Gurgaonho fampiroboroboana ny orinasam-pianakaviana manan-karena miaraka amin'ny foto-drafitrasam-pahaizana momba ny toetr'andro sy toeram-pamokarana avo lenta araka ny filàna ara-teknika ara-teknika.
Manana maromaro ny ITSefitrano fianarana any Gurgaonizany hoe any South City 1, Star Mall sy Sector - 14 izay akaiky ny Centre Huda City, Iffco Chowk sy MG Metro. ITS dia manana 13Fiofanana hofan-trano any Gurgaonary afaka mandray ny mpandray anjara 270 amin'ny iray andro. NYFampiofanana any Gurgaondia manana milina faran 'ny farany ambony, sarin-drakitra mipetaka sy fotsy fotsy.
samy maka izay tiany
Makà ranomainty avy amin'ny kilasinao ao amin'ity faritra tsy misy rano ity izay ivondronan'ny mpianatra rehetra. Manaova fanandramana amin'ny sakafo indianina sy afrikana samihafa mba hanomezana fanafody ho an'ny tsironao.
Ny efitranon'ny trano fandraisam-bahiny ao Gurgaon dia manana efitrano tsara ventilated amin'ny alàlan'ny fampakaram-bary maoderina. Toy ny Wi-Fi, TV, Fanaterana, famahanana herinaratra, dokotera-amin'ny fiantsoana ny fijanonana madio.
Hotel Pllazio (4-kintana)
Nalaina tao amin'ny tranobe iray nentanin'ny rafitra Eoropeana, ny Pllazio Hotel dia manolotra dobo filomanosana, spa & trano fialan-tsasatra & fitorevahana.
700 m avy amin'ny Metro Station Huda City Center & Fortis Hospital
Manafina Bar ho an'ny fisotroana aorian'ny sakafo
Diniho ao amin'ny Restaurant Melange World Cuisine.
Hotel Crown Plaza (4-kintana)
Miarahaba anao amin'ny fomba vaovao sy tsara kokoa hanaovana fivoriana raharaham-barotra, toerana izay ahatsapanao fa mifandray tanteraka ianao ary miala sasatra amin'ny alina.
Sakafo sy sakafo vaovao
Toeram-piofanana amin'ny toeram-pivarotana eo an-toerana
Toeram-pitsaboana sy toeram-pitsaboana eo an-toerana
B 100 A, tanàn-dehiben'i 1, Tranon'ny Signature,